Fahasamihafana eo amin'ny Magnetite sy Hematite | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Magnetite sy Hematite | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / fahasamihafana eo amin'ny Magnetite sy Hematite
28 Janoary 2012 Narotsak'i Dunee
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny magnetite sy hematite dia ny vy ao amin'ny magnetite dia ao amin'ny +2 sy +3 oxidation milaza fa, amin'ny hematite, dia ao amin'ny +3 oxidation state ihany.
Magnetite sy hematite dia mineraly vy. Samy manana vy amin'ny fanjakana oksiasiôna samy hafa izy ireo, ary miendrika oksida vy . Ny fahasamihafana lehibe iray hafa eo amin'ny magnetite sy hematite dia ny magnetite mainty loko, fa ny hematite dia manana loko isan-karazany.
2. Inona no atao hoe Magnetite
3. Inona no atao hoe Hematite
4. Fampitahana mifanila - Magnetite vs Hematite amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Magnetite?
Magnetite dia vy oksida miaraka amin'ny raika simika Fe 3 O 4 . Raha ny tena izy, dia fifangaroan'ny oksida vy roa, FeO sy Fe 2 O 3 . Noho izany dia azontsika aseho amin'ny FeO · Fe 2 O 3 . Araka ny nomenclature IUPAC dia vy (II, III) oksida ny anarany. Saingy, matetika no antsointsika hoe oksida ferrous-ferric. Magnetite dia nahazo ny anarany satria andriamby.
Sary 01: fisehoan'ny andriamby
Mainty ny lokon'ny Magnetite, ary mainty koa ny soritr'aretiny. Izy io dia manana metaly mamiratra. Amin'ny ambaratonga Mohs, ny hamafiny dia omena ho 5,5 - 6.5. Ny Magnetite dia manana rafitra kristaly octahedral, saingy tsy dia mahita karazana rhombododecahedron isika. Mampiseho tapaka tapaka tsy ara-dalàna sy tsy mitovy izy io. Ankoatr'izay, ny magnetite dia matetika mitranga any Afrika Atsimo, Alemana, Russia ary toerana maro any Etazonia. Misy ihany koa amin'ny meteorites. Magnetite dia manan-danja be noho ny toetrany andriamby. Ankoatr'izay dia sorbent izy io, noho izany dia ilaina amin'ny fanadiovana rano. Ankoatr'izay, azontsika atao ny mampiasa azy io ho toy ny catalyst sy ny coating material.
Inona ny atao hoe Hematite?
Ity ny vy oksida, izay misy fe (3+) ion. Noho izany, manana ny molekiola misy ny Fe 2 O 3 izy io . Mineraly afaka manana loko maro izy ity. Ny mineraly dia manana toetra tsy azo ovaina na tsy mazava. Mitranga amin'ny loko mena, volontsôkôlà, mena volontsôkôlà, miverina na miloko volafotsy. Na izany aza, ireo karazana mineraly hematita rehetra ireo dia manana dian-volontsôkôlà mena. Raha ny marina dia nahazo ny anarany ny hematite noho ny lokon'ny rà manana azy rehefa ao anaty endrika vovoka.
Sary 02: endrika hematite miloko mena
Amin'ny ambaratonga Mohs, ny hateviny dia 5-6. Marefo ny hematite, saingy mafy noho ny vy madio izy io. Hematite dia manana rafitra kristaly rhombododecahedral. Ity dia mampiseho tapaka tapaka tsy ara-dalàna / tsy mitovy. Amin'ny hematite ambany dia antiferromagnetic. Saingy amin'ny mari-pana ambony dia mampiseho paramagnetism izy io. Misy karazana hematite vitsivitsy etsy ambany.
Raozy hematita - kristaly voarafitra mitovy amin'ny voninkazo raozy.
Voan'ny voa - manana endrika voa tahaka ny besinimaro izy io.
Tiger iron - tahiry tranainy be ireo. Ny fametrahana dia misy sosona hematite volondavenona sy mena jaspa.
Specularite - manana loko volondavenona volomparasy manjelanjelatra izy; noho izany, ilaina toy ny firavaka.
Heolite Oolitika - misy voamadinika boribory. Manana loko volontany mena sy mamirapiratra eto an-tany izy io.
Ny hematite dia mitranga any Angletera, Mexico, Brezila, Aostralia ary ny faritry ny Farihy Superior. Zava-dehibe amin'ny firavaka sy amin'ny firavaka.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Magnetite sy Hematite?
Magnetite dia vy oksida misy raika simika Fe 3 O 4 raha hematite kosa dia oksida vy miaraka amin'ny raika simika Fe 2 O 3 . Ny vy andriamby dia ao anaty +2 sy +3 fanamafisana ny oksidasiana, fa amin'ny hematite kosa dia ao anatin'ny fanjifana +3 ihany. Io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny magnetite sy hematite. Ankoatr'izay, ny magnetite dia manana atiny vy avo kokoa noho ny hematite; noho izany, avo kokoa ny kalitaony.
Ankoatr'izay, amin'ny loko koa dia misy tsy fitoviana amin'ny magnetite sy hematite. Ny Magnetite dia mainty amin'ny loko, fa ny hematite dia manana loko isan-karazany. Na izany aza, ny magnetite dia manana dian-mainty, fa ny hematite kosa manana dian-jaky mena. Toy ny fahasamihafana iray hafa eo amin'ny magnetite sy hematite, ny hematite dia singa iray amin'ny harafesina, fa ny magnetite kosa tsy. Ankoatr'izay, rehefa dinihina ny toetran'ny andriamby an'ny mineraly roa, ny magnetite dia andriamby matanjaka voajanahary, fa amin'ny hematite dia misy ny magnetisma rehefa manafana. Ankoatr'izay, ny fahasamihafana iray hafa eo amin'ny magnetite sy hematite dia ny rafitr'izy ireo. Hematite dia manana rafitra kristaly rhombododecahedral raha toa kosa, ny magnetite dia mampiseho matetika ny firafitry ny kristaly oktafera.
Famintinana - Magnetite vs Hematite
Magnetite sy hematite dia vyida vy manan-danja. Na dia misy fahasamihafana maro eo amin'izy ireo aza, ny mahasamihafa azy lehibe eo amin'ny magnetite sy hematite dia ny vy ao amin'ny magnetite dia ao amin'ny +2 sy +3 ny fihanaky ny oksidasiana, fa kosa amin'ny hematite dia ao anatin'ny fanjakan'ny oksidasi +3 fotsiny izy io.
1. “Magnetite.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 sept. 2018. Hita eto
2. "Hematite." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 2 Oktobra 2018. Hita eto
1. ”Magnetite-118736 ″ Nosoratan'i Rob Lavinsky, iRocks.com (CC BY-SA 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. "Vatactact BIF manankarena Hematite" Nosoratan'i James St. John (CC BY 2.0) avy amin'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny reaktoran'ny nokleary sy ny baomba nokleary Fahasamihafana eo amin'ny iodine sy ny potassium Iodide Fahasamihafana eo amin'ny magnesium sy magnesium oxide Fahasamihafana eo amin'ny vy voa sy ny vy Fahasamihafana eo amin'ny asidra malemy sy mahery
Filed Under: Simia
14 Jolay 2015 amin'ny 9:03 alina
Fahasamihafana eo amin'ny asidra Methacrylic sy asidra acrylic
Fahasamihafana eo amin'ny aretina Neuromuscular sy ny musculoskeletal
Fahasamihafana eo amin'ny fanelingelenana manorina sy manimba
Fahasamihafana eo amin'ny fitarihana sy ny fahefana
Fahasamihafana eo amin'ny Cichlids Afrikana sy Amerika Latina